Gmail Hecker များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် အချက်6ချက် ~ IT Guide Myanmar
Phishing ဆိုတာဘာလဲ ? Phishing ဆိုတာက gmail အကောင့်တွေကိုအကောင်းဆုံး heck လို့ရတဲ့ နည်းပညာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ Phishing ကိုသုံးပြီး ကိုယ်ကြိုးရှာနေတဲ့ သူတွေအတွက် မူလစာမျက်နှာကို သူတိ့ရအောင်ရှာဖွေပြီး အချက်အလက်တွေနှိုက်ယူကြပါတယ် ။ ရတဲ့ အချက်လက်တွေမှာ သူတို့ လိမ္မာသလို အသုံးချပြီး email အသုံးပြုသူတွေကို ဓားစာခံ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိအောင် အောက်ပါ အချက်6ခုကို လိုက်နာရင်း Hacker တွေ ရဲ့ Phishing ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
(မြန်မာပြည်မှာ အသုံးချတဲ့သူများကတော့ စီးပွားရေး အချက်လက်တွေ ထက် ကိုယ်ရေကိုယ်တာကို Hecking လုပ်မှု့ပိုမိုများပျားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်)
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို လေ့လာစမ်းစစ်ပြီး
Hecker ရန်က တော်တော်လေးေ ရှာင်နိုင်လို့ရနေပါတယ် ။
1. အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တဲ့ အင်တာနက် Browser
အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တဲ့ အင်တာနက် Browser
ကို ပြောရရင် . Phishing ရန်ကို ကာကွယ်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ Browser တွေမှာ
(a) Fire Fox 3.0 နှင့်အထက်
(b) Internet Explorer7နှင့်အထက် အပြင်
(c)Opera 7x မြန်မာပြည်မှာ သုံးလေ့မရှိပါဘူး
တွေက hecking ရန်ကို Platform လုပ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်
2. အရေးကြီးဆုံးသော ကိုယ်ရေး အချက်လက်တွေကို လုံးဝမတင်မိပါစေနဲ့
(ဒါက လုံးဝမမေ့ဘို့ အရေးကြီးပါတယ်)
ကျောင်းတက်ရန် အချက်လက်၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ၊ ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်လက်နဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေလိုမျိုးတင်မိရင်တော့ Hecker တွေအတွက်
ဈေးပွဲတော်လိုတွေ့စေနိုင်ပါတယ် ဒီအချက်မျိုးကို Fax သို့ Sms လို့ခေါ်တဲ့ Message ပို့တဲ့ စနစ်ဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်
3.သံသယရှိသော Filter (ဇစ်များ)
ဒီလို စစ်ဖို့ကို သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ပထမဦးစွာ သင့် email ရဲ့
Setting ကိုသွားပါ ပြီးလျှင် Filter ကို ကလစ်ပြီး စစ်ထုတ်ပါ
အဲ့အဖြေက ပြတဲ့ သံသယ ရှိစရာ ဖိုင်များရှိနေခဲ့ရင် ချက်ချင်း ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ
ဒီနေရာမှာတော့ အသုံးပြုတဲ့ Server နဲ့ တိုင်းပြည်အလိုက်ကြော်ငြာတွေရှိတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
သင်ဆုမဲပေါက်တယ် ၊ ငွေရမယ် ၊ အမေရိကကို သွားဖို့ ရနေပြီ စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်မြင်ဘူးခဲ့ပါတယ်
အဲ့လိုမျိုး တွဲလာတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှိခဲ့ရင် မဖွင့်ပါနဲ့ ဖွင့်ခဲရင်တောင် ဘာအချက်အလက်မှဖြည့်ပြီး မပေးလိုက်ပါနဲ့
သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာလေးတွေထဲက သူတို့ ညစာ ဘီယာဖိုးလောက်တော့ ပါသွားပါလိမ့်မယ်
5. POP/IMPA ကို ဖွင့်မထားမိပါစေနဲ့
ဒီအချက်ကိုတော့ လူငယ်တော်တော်များများနဲ့ Beginner (စတင်အသုံးပြုသူတွေ) မသိကြပါဘူး လွယ်ကူပါတယ် email ရဲ့ Setting ကို သွားပါ General မှာ Forwarding and POP/IMAP ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် Disable ဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပါ
6.နောက်ဆုံးသော အရေးကြီး သည့် လိုက်နာရန်
ဒီအချက်ကိုတော့ သေချာ မှတ်သားစေချင်ပါတယ်
သင့်ဆီရောက်လာတဲ့ လင့်တွေထဲက သင်မမြင်ဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းဖိတ်စာ ဒါမှမဟုတ် ecard ဒါမှမဟုတ် promotion လင့်များ စသည်ဖြင့်ဝင်လာလေ့ရှိသောစာများကိုမကလစ်မိပါစေနှင့်
(ဥပမာ - ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ Check out for blogs ) စသော စာများတွင်လင့်ပါပါသည် သင်ထိုသို့သော လင့်များကို ဖွင့်နိုင်သည် သို့သော် မသိသော လင့်မှားပါဝင်ပါက လုံးဝမဖွင့်ပါနှင့် ထိုလင့်များမှာ သင့် ကွန်ပျုတာကို ဝင်မွှေနိုင်သော ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သေချာမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ် ။
(ကိုမျိုးဖြည့်စွက်ချက် : ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသမားအများစု မှားယွင်းနေတာကို ထောက်ပြပါ့မယ်
ဒါက ဆိုင်မှာ သုံးရတဲ့ သူအတွက်လဲ လိုက်နာရန်လိုပါတယ်
(a) Browser တွေမှာ password ကို save လုပ်ထားမထား အရင်လေ့လာပါ
(b) အင်တာနက်မှာ email သုံးရင် ဒီအချက်ကို အရင်သင်ထားသင့်ပါတယ်
(c) သင့် password ကို Save လုပ်မလား မေးခဲ့ရင် လုံးဝမလုပ်ထားပါနဲ့
(d) ဒီလို Password ကို save လုပ်ထားမိရင် ပိုခံရတတ်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာ ပိုင်ရှင်များ ပိုဆိုးပါတယ် ခင်ဗျား ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ပါ
အဲ့တော့ password ရိုက်ဖို့ ပျင်းရင် ဖြင့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မုန့်ဖိုးပေးရမှာပါခင်ဗျား )
ကြေနပ်ပါသလားခင်ဗျာ ကျွန်တော် Phishing ဆိုတာကို ယနေ့အထိ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဝေမျှပါဘူး ဒါဟာ ပညာကပ်စီးနဲတာ မဟုတ်ပဲ မတတ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ အတွက် ဧဒင်က စပြီး ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုဆိုင်မျိုးမှာမဆို မတင်ပေးခဲ့ပါဘူး
တင်လာတဲ့ သူတွေထံက Software ပါခဲ့ရင်လဲ ကျွန်တော် ဖြုတ်ထုတ်ပါတယ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဝင်စပ်စုခြင်းဟာ အင်မတန် အောက်တန်းကျနသော နည်းပညာတစ်ရပ်လို့ ကျွန်တော် ခံယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွယ်ဆုံး ရေပန်းစားလျှက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားမှ နည်းပညာရှင် Blogger များရေးသားပေးတဲ့ Blog ကို ကျွန်တော် သဘောတွေ့လို့ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာပါ ဒီအချက်လက်တွေကို ထိန်းထားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာက Hecker ရန်က ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါမှာ ဒီနည်းပညာကို 2009 ခု ဇူလိုင်လမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော် ယနေ့ နောက်ဆုံးသော နည်းပညာများကို လက်လှမ်း အမှီလိုက်နေရင် အလုပ်ကြားက ရေးသားပေးခဲ့တာပါ ။ ဆိုလိုတာက အောက်ဒိတ်မဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်နည်းတစ်ခုလို့ ပြောချင်တာပါ ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူငယ်မောင်မယ်တွေ မှာ hecking လုပ်ချင်လို့ စုံစမ်းခဲ့ရင် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မိဘကို အရှက်ရအောင် လုပ်ချင်လို့လားလို့ မေးပြီး နားလည်အောင် ရှင်းပြ တားမြစ်ပေးဖို့ လူငယ်တွေ အစား ဧဒင် လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။
မူရင်းရေးသားထားသော Blog ကိုလဲ ဆက်တွဲဖော်ပြပေးထားပါတယ် ဘာသာပြန်ညံဖျင်းခဲ့ရင် နားလည်ပေးမယ်လို့ ယူဆတောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ Six ways to protect your gmail account from being cracked
POSTED BY MVISHAKH ON 19 JULY 2009
မှတ်ချက် ၊ ဒီ Blog အား မည်သည့်ဆိုဒ် ၊ မည်သည့် Blogpost အတွက်မဆို ကူးယူနိုင်ပါတယ်